बिवाह वर्ष गाँठमा पिता बने आर्यन - VOICE OF NEPAL
बिवाह वर्ष गाँठमा पिता बने आर्यन
६ बैशाख २०७६, शुक्रबार १७:५० 160 ??? ???????
नेपाली सिनेमा क्षेत्रका चर्चित अनि लोकप्रिय नायक आर्यन सिग्देल बुवा बनेका छन् । आज शुक्रवार दिउँसो साढे १२ बजे उनलाई पुत्र लाभ भएको हो । श्रीमती सपना भण्डारी सिग्देलले बसुन्धारामा रहेको चिरायु अस्पतालमा पहिलो सन्तानको रूपमा छोरालाई जन्म दिएकी हुन् । पुत्र लाभ भएसंगै आर्यनलाई आजको दिन डबल खुसी मिलेको छ । किनकी आजकै दिन उनको पाँचौ म्यारिज एनिभर्सरी समेत हो। बुवा बन्नु त्यो पनि बिवाहको गरेको दिनमै यस्तोमा आर्यनको खुसीको सिमा नै छैन ।
आर्यन र सपनाले वि.सं २०७१ साल वैशाख ६ गते प्रेम बिवाह गरेका थिए । बिवाह अगाडी यी दुईबीच करिब ४ बर्षे प्रेम सम्बन्ध रहेको थियो । लाखौँ युवतीहरुको ढुकढुकी रहेका आर्यनले सपनासंग बिवाह गर्दा उनका फ्यानहरु निकै निरास थिए । बिवाह अघि सपना आर्यनको डाइहार्ट फ्यान थिईन । आर्यनभन्दा सपना ७ वर्ष कान्छी छिन् । केही समय अगाडी बेबी बम्पसहित तस्बिर खिच्दा गाली र ताली दुबै पाएका आर्यन सपनालाई सन्तान लाभ भएकोमा बधाई । यतिबेला आर्यन पनि एक पछि अर्काे फिल्ममा अनुबन्धित भईरहेका छन् ।